गर्भवती महिलाले खानेकुरा आफूखुशी खानुहुँदैन | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता गर्भवती महिलाले खानेकुरा आफूखुशी खानुहुँदैन
on: २५ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०९:३७ अन्तरवार्ता
गर्भवती महिलाले खानेकुरा आफूखुशी खानुहुँदैन
डा. राघवेन्द्र ठाकुर, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ
कतिपय महिला महीनावारी भएको समयमा सेतो पानी बग्नुलाई सामान्य रूपमा लिन्छन् । तर यो यौन सङ्क्रमण तथा यौनरोगको एउटा प्रमुख कारण पनि हो । सामान्यतया महिलाको योनि तथा पुरुषको लिङ्गमा रहिरहने सूक्ष्म जीवाणु र कीटाणुले अनुकुल अवसर पाएमा वा त्यो यौनक्रियाद्वारा सरेर यौन सङ्क्रमण हुने गर्छ । अस्पतालमा उपचारको क्रममा पनि प्रजनन नलीमा सङ्क्रमणको खतरा हुन्छ, जसलाई ‘पेल्भिक इन्फ्लामेटोरी डिजिज’ भनिन्छ । असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट सरेको सङ्क्रमणलाई यौन सङ्क्रमण वा योगरोग भनिन्छ । असुरक्षित यौनसम्पर्कबाट हुने यस्ता सङ्क्रमणको पूर्णरूपमा उपचार सम्भव भए पनि विश्वका करीब ३४ करोड महिलामा यस्तो सङ्क्रमण देखापरेको पाइएको छ । प्रस्तुत छ, महिलामा हुने यस्तो सङ्क्रमण, सेतो पानी बग्ने समस्या, यसका लक्षण, उपचारलगायत विषयमा
डा. राघवेन्द्र ठाकुरसँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानी :
सेतो पानी बग्ने समस्या कति प्रकारका छन् ? यसका लक्षण के के हुन् ?
यो रोग धेरै प्रकारका हुन्छन् । तीमध्ये क्ल्मामादिया, भिरिङ्गी र धातु रोग प्रमुख मानिन्छन् । क्ल्मामादिया सङ्क्रमितमध्ये ७५ प्रतिशत महिलामा कुनै लक्षण देखिँदैन । तथापि, योनिबाट तरल पदार्थ बग्ने, उक्त अङ्ग वरिपरि चिलाउने, पिसाब गर्दा पोल्ने, पीडा हुने र तल्लो पेट दुख्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
यसको उपचार समयमै नगरे के समस्या आउँछ ?
यो रोगको समयमै उपचार नगरिए महिला गर्भवती हुनबाट वञ्चित हुन सक्छन् । यसबाट गर्भमा भएका बच्चामा समेत सङ्क्रमण हुने भएकाले बच्चा खेर जाने, अवधि नपुगी जन्मिने र दीर्घकालीन रूपमा रहिरहेमा महिलामा बाँझोपन हुनेजस्ता समस्या आउँछन् । यसबाट यौनाङ्गमा क्यान्सरसमेत हुन सक्छ ।
यो रोग लाग्न नदिन केमा ध्यान दिनुपर्छ ?
यो सङ्क्रमण महिलामा योनिबाट शुरू हुँदै पाठेघरसम्म पुग्ने भएकाले यौनाङ्गलाई दैनिक रूपमा सफा राख्नुपर्दछ । असुरक्षित यौनसम्पर्क गर्नुहुँदैन । सबै यौनजन्य सङ्क्रमणलाई सजिलै पहिचान गर्न सकिँदैन । कहिलेकाहीँ यस्ता सङ्क्रमणका लक्षण केही दिन देखिन्छन्, केही दिनमा हराएर जान्छन् । तर, यसको अर्थ सङ्क्रमण निको भइसकेको भन्ने होइन । समयमै उपचार गरे यो रोग निको हुन्छ । त्यसैले, यस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त चिकित्सकसँग सल्लाह लिई आफ्नो शारीरिक परीक्षण गराउनु नै उत्तम हुन्छ ।
महिलामा सेतो पानी बग्नुका कारण के के हुन् ?
महिलामा सेतो पानी बग्नुका कारण दुईओटा छन् । शरीरमा लाग्ने अन्य रोग एउटा कारण हो भने कुनै रोग नलागे पनि यस्तो समस्या हुन सक्छ । महीनावारी हुनुभन्दा ५ दिनअगाडि र महीनावारी भएको १४ दिनमा धेरै पानी बग्यो भने खासै आत्तिहाल्नुपर्दैन । तर, दिन दिनै यो समस्या देखियो भने चिकित्सककोमा जानैपर्ने हुन्छ । खासगरी नेपालमा योनि र पाठेघरमा हुने सङ्क्रमणले महिलामा सेतो पानी बग्ने गरेको पाइएको छ । विशेषगरी गर्भावस्थाका बेला, पिल्स चक्कीको सेवन गर्दा ताका, महीनावारीको मध्यतिर अधिक योनिरस बग्दा चिन्ता गर्नु पर्दैन । पाठेघरको मुखमा रहेको कुनै समस्याले योनिस्राव बढेको हो भने सामान्य खालको शल्यक्रियाबाट उपचार गर्नुपर्छ । पिल्स चक्कीको सेवनले योनिस्राव बढेको छ भने केही समयका लागि त्यसको सेवन बन्द गर्नुपर्छ । यसैगरी धेरै चिल्लो, मसालेदार, जङ्क फूड तथा धेरै उपवास (व्रत) बस्नाले पनि कमजोर भई सङ्क्रमण हुन सक्छ ।
यस्तो सङ्क्रमणले योनिरसको रङमा पनि परिवर्तन हुन्छ ?
अधिकांश महिलाको योनिबाट सेतो, पहेँलो, हरियो, रगत मिसिएको आदि प्रकारको चिप्लोपदार्थ बग्ने समस्या हुन्छ । यो सामान्य पनि हुन सक्छ वा प्रजनन अङ्गमा कुनै किसिमको सङ्क्रमणको सङ्केत हुन सक्छ । यो पानी जस्तो पदार्थ सन्तान उत्पादन गर्ने अङ्गहरू ओभरी, फ्लोपिवन ट्युब, भेजिना तथा क्यरभिक्सबाट पनि हुन सक्छ । सामान्य किसिमबाट बग्ने पदार्थ गन्ध नआउने पातलो हुन्छ । गर्भवती भएको बेला बग्ने सेतो पानी सामान्य हुन्छ । असामान्य खाले पानी पहेँलो, हरियो वा गन्ध आउने खालको हुन्छ । यसमा कुनै किसिमको हानिकारक जीवाणु हुन सक्छ ।
यो सङ्क्रमण हुनुमा यौनसम्पर्कबाट सर्ने रोगहरू, भाइरस तथा ब्याक्टेरियल रोगहरू, भिरिङ्गी जस्ता कारण मुख्य हुन्छन् । पाठेघरको मुखमा सङ्क्रमण हुनुका साथै मस्क्युस ग्लाण्ड सङ्क्रमण हुँदा धेरैजसो सेतो पानीसहित विभिन्न रङमा देखिन सक्छ । योनिमा सङ्क्रमण भएमा योनि धेरै चिलाउने, मैलो तथा गन्हाएको पानी बग्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । योनि धेरैजसो फङ्गसबाट सङ्क्रमण हुन्छ । प्रोटोजोन भन्ने परजीवीले पनि सङ्क्रमण ल्याउँछ ।
सेतो पानी बग्ने समस्या हुँदा के कस्ता खानेकुरा खानुपर्छ ?
सर्वप्रथम त यो समस्याको निदानका लागि चिकित्सकलाई परीक्षण पनि गराउनुपर्दछ । यस्तै, आफै उपचारमा पनि लाग्नुपर्दछ । यस्तो बेला केरा, स्याउ, आँपलगायत फलफूल बढी सेवन गर्नुपर्छ । यसैगरी हरियो सागपात खाने, प्रशस्त पानी पिउने, कागतीपानीले योनि वरिपरि सफा गर्ने गर्नुपर्छ । तर, गर्भवती महिलाले आफूखुशी खानेकुरा खानुहुँदैन ।
सेतो पानी बग्दा शरीरमा कस्तो समस्या आउँछ ?
योनिस्राव सामान्यतया पानीजस्तो सङ्लो, सफा र चिप्लो हुनुपर्छ । तर, यौनाङ्गमा कुनै प्रकारको सङ्क्रमण हुँदा वा यौनरोग लाग्दा भने रङ फेरिई योनिस्रावको बहाव बढ्ने, गन्ध आउने, तल्लो पेट दुख्ने, योनिद्वार चिलाउने, पिसाब पोल्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन् । पाठेघरको मुख वा योनिद्वारको सङ्क्रमण, पाठेघरको मुख वा योनिद्वारको भित्ताको ट्युमर (क्यान्सर), योनिद्वारमा कुनै प्रकारको बाह्य वस्तु अड्केमा असामान्य प्रकारको योनिस्राव बग्छ । साथै, कडा खालको एण्टीबायोटिक औषधिको सेवन, मधुमेह, एड्सजस्ता मानव शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली कम हुने अवस्थामा पनि योनिस्राव असामान्य हुन्छ ।
यस्तो सङ्क्रमण हुँदा कमजोरी हुने, अल्छी लाग्ने गर्छ । यसैगरी सेतो पदार्थ योनि वरपर देखिन्छ र ढाड तथा पेटको तल्लो भागमा दुख्छ । त्यसैगरी शरीर गल्ने, कब्जियत हुने, टाउको दुख्ने, योनि चिलाउने, सुनिने तथा बेचैनी हुने गर्छ । आँखाको तलपट्टि कालो हुने, च्याउरी पर्ने, अपच हुने, अपच हुने, भोक नलाग्ने, पेट फुल्ने र नराम्रो गन्ध आउने समस्या पनि देखिन्छ ।
यो समस्या कुन उमेर समूह महिलामा देखिन्छ ?
साना बालिकामा पनि सेतो पानी बग्ने समस्या हुन सक्छ । उनीहरूको योनि सफा नभएमा, जुका परेमा, फोहोर भएमा पानी बग्ने हुन्छ । बच्चालाई यस्तो समस्याबाट बचाउन बच्चाको सरसफाइ र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ । खासगरी १५ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका महिलामा सेतो पानी बग्ने गर्छ । यो उमेर महिलाको बच्चा जन्माउन सक्षम उमेर हो । पाठेघरमा हुने क्यान्सर, योनि र पाठेघरमा हुने जुनसुकै सङ्क्रमणको कारण पनि पानी बग्ने समस्या हुन्छ । ५० वर्षभन्दा माथिका महिलामा सेतो पानी बग्ने समस्या देखिएको हुन्छ । यो उमेर समूहका महिलामा पाठेघरमा हुने जुनसुकै क्यान्सर लागेमा पनि पानी बग्ने समस्या हुन सक्छ । यस्तो महिलामा थोरै पानी बग्ने, तर एकदमै गन्हाउने पानी बग्ने गर्छ । यो उमेरका महिलामा विस्तारै हर्मोनको कमी हुँदै जान्छ । शरीरमा हुने हर्मोनको कमीका कारण पनि महिलामा सेतो पानी बग्ने समस्या आउँछ । योनि र पाठेघरमा हुने सङ्क्रमणले महिलामा सेतो पानी बग्ने समस्या हुन्छ ।
योनिमा हुने सङ्क्रमणबाट कसरी बच्ने ?
दिनदिनै योनि सफा गर्नुपर्छ । सफा गर्दा योनिलाई सफा पानीले धुनुपर्छ । साबुनले धुँदा योनि सुक्खा हुने र चिलाउने हुन सक्छ । हरेक दिन भित्री वस्त्र फेर्ने गर्नुपर्छ ।
यौनसम्पर्कले पनि योनिमा सङ्क्रमण हुन्छ र ?
श्रीमान्लाई यौनरोग लागेको छ भने श्रीमान्सँग यौनसम्पर्कपछि पनि योनिमा सङ्क्रमण बढ्छ । योनिमा हुने विभिन्न सङ्क्रमणले सेतो पानी बग्ने गर्छ । यस्तो बेला पनि सेतो पानी गन्हाउँछ । यौनसम्पर्कविना पनि योनिमा सेतो पानी बग्ने समस्या आउन सक्छ । यौनसम्पकविना पनि पाठेघरमा सङ्क्रमण हुन सकछ । मधुमेह भएको महिला र गर्भवती महिलामा यस्तो सङ्क्रमण भएको पाइन्छ । मधुमेह भएका महिलामा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ । त्यसैले, सेतो पानी बग्ने समस्या हुन्छ ।
सामान्य किसिमको योनिरस कस्तो बेला बग्छ ?
यौवनावस्थामा महीनावारीको मध्य भागतिर (डिम्ब निस्किने बेला), महीनावारी हुनु ठीकअगाडि स्त्री जननेन्द्रियमा रगतको बहाव बढ्नाले सेतो पानी बढी बग्छ । यौन उत्तेजनाको बेला ग्रन्थीबाट अधिक मात्रामा ग्रन्थीरस उत्पादन भई तथा गर्भवती बेलामा इस्ट्रोजेन हार्मोनको अधिक उत्पादनले रगतको बहाव बढेर पनि योनिस्राव हुन्छ । पाठेघरको मुखको बाह्य सतह ताछिएर, पाठेघरको मुख जीर्ण तवरले सुन्निएर वा त्यसमा सानो मासु पलाएर पनि योनिस्राव बहन्छ । पाठेघर झर्ने (आङ खस्ने) समस्या भएका, पाठेघर पछाडि फर्किएका, पाठेघरको मुखमा जीर्ण प्रकारले सुन्निएमा, पिल्स चक्कीको सेवन गरेका महिलाको यौनाङ्गमा रगत बहाव बढ्नाले र लामो समयसम्म बिरामी हुँदा योनिद्वारको बाह्य तह अत्यधिक झर्नाले पनि योनिरस बग्न सक्छ ।